November 18, 2020 - Online Hartha
November 18, 2020 by Online Hartha
လူပျိုစစ်မစစ်ကို ဒီအချက်တွေကနေ သိရှိသွားနိုင်ပါတယ်… အမျိုးသားအားလုံးလိုလိုဟာ လူပျိုဘဝကို အစောကြီး ဆုံးရှုံးတတ်ကြတယ်လို့ အများစုက ယူဆကြသည့်တိုင် အသက် ၂၅၊ ၃၀ ထိတောင် ဖိုမကိစ္စမစမ်းသပ်ဖူးတဲ့ အမျိုးသားတချို့ရှိနေတယ် ဆိုတာပါပဲ။ သူတို့လည်း သူ့အကြောင်းပြချက်နဲ့သူ ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ကိုယ်ဒိတ်လုပ်တဲ့ ကောင်လေးဟာ လူပျိုစစ်မစစ် သိချင်တယ်ဆိုရင် ခန့်မှန်းသိရှိနိုင်မယ့် လက္ခဏာရပ်တချို့ရှိပါတယ်။ တခါတရံ ခန့်မှန်းချက်တွေ လွဲကောင်းလွဲပါလိမ့်မယ်။ လူပျိုစစ်မစစ် သူသာအသိဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သိချင်စိတ်ပြင်းပြနေသေးတယ်ဆိုရင် လူပျိုစစ်စစ်တွေ ပြုမူတတ်တဲ့ ကိုယ်အမူအရာတချို့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူပျိုစစ်စစ်ဖြစ်တယ်၊ မဖြစ်ဘူးဆိုတာနဲ့ သူ့အချစ်ရေးအဆင်ပြေမှုရှိတယ် မရှိဘူးဆိုတာကတော့ လုံးလုံးမသက်ဆိုင်ကြောင်း သိထားသင့်ပါတယ်။ ဒီတော့ လူကောင်းဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာ သူ့အတွေ့အကြုံရှိမှု သို့မဟုတ် မရှိမှုပေါ် မူတည်ပြီးတော့ မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့။ မိမိတို့အချစ်ရေးဆက်ဆံမှုရဲ့ အနှစ်သာရကို အဓိကထားကြည့်ပါ…. ၁။ သင်နဲ့ … Read more
Categories အစုံအလင် Leaveacomment
ဘာလို့ရှေ့မီးဖွင့်မောင်းရတာလဲလို့ ခဏ ခဏ လာမေးကြလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့်
ဘာလို့ရှေ့မီးဖွင့်မောင်းရတာလဲလို့ ခနခနလာမေးကြလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့် မိဘပြည်သူများရှင့် ဘာလို့ရှေ့မီးဖွင့်မောင်းရတာလဲလို့ ခနခနလာမေးကြလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့် ကျွန်တော်ကျွန်မတို့က မီးဖွင့်မောင်းဆိုလို့သာ မောင်းလိုက်ရယ်…..ဘာလို့ဖွင့်မောင်းရတာလဲလို့ ကျွန်မကိုမေးမြန်းနေသော ပြည်သူများရှင့်… ရှေ့မီးအနိမ့်ကို ဘာကြောင့်နေ့/ညဖွင့်မောင်းရလဲဆိုရင် အဓိကရည်ရွယ်ချက်က. ယာဉ်အန္တရာယ် လျော့ကျစေရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်ရှင့်….. ကုန်တင်ကားအများစုဟာ ကားကိုယ်ထည်နှင့်အမြင့်ထက်ကျော်လွန်ပြီးကုန် ပစ္စည်းတင်​ဆောင်လာကြတဲ့အခါ နောက်မြင်ကွင်းကျဉ်းတတ်ပါတယ် …. အဲဒီလို နောက်မြင်ကွင်းကျဉ်းတဲ့ ကုန်တင်ကားမျိုးကို မိမိမောင်းနှင်းလာတဲ့ ဆိုက်ကယ်က ကျော်တက်တဲ့အခါမျိုးမှာ မိမိအချက်ပေးတဲ့ ဟွန်းသံက်ို မကြားရဘဲ ….. မိမိကျော်တက်ဖို့ ယူထားတဲ့ ဘယ်ဘက်ယာဉ်ကြောကို ကုန်တင်ကားက ယာဉ်ကြောပြောင်းတဲ့အခါမျိုးမှာ ယာဉ်တိုက်မူ ဖြစ်စေန်ိုင်ပါတယ်ရှင့်….. အဲသလို ကားမျိုးနဲ့ကြုံဆုံရတဲ့အခါ မိမိက ရှေ့မီးအနိမ့်လေးဖွင့်မောင်းလာရင် မိမိရဲ့မီးရောင်းကို ကားသမားမြင်ပြီး ယာဉ်ကြောမပြောင်းခဲ့ရင် ယာဉ်တိုက်မူမဖြစ်နိုင်ပါ…. နောက်တစ်ချက်က ဇိမ်ခံကားမောင်းနှင်လာကြတဲ့သူ လူအများစုဟာ ကားကိုမှန်အလုံပိတ် အဲကွန်းဖွင့်/သီချင်း နားထောင်ရင်း ကားမောင်းလာမိတဲ့အခါ … Read more
အိမျရှမှေ့ာ သတ်တာလေးတဈလုံးပျေါမှာ ထိုငျနလေို့ အခြိနျကွာလာတော့ ဘာဖွဈလို့လဲ ထှကျမေးကွညျ့လိုကျ​သောအခါ…
အိမ်ရှေ့မှာ သတ္တာလေးတစ်လုံးပေါ်မှာ ထိုင်နေလို့ အချိန်ကြာလာတော့ ဘာဖြစ်လို့လဲ ထွက်မေးကြည့်လိုက်​သောအခါ… အိမ်ရှေ့မှာ သတ္တာလေးတစ်လုံးပေါ်မှာ ထိုင်နေလို့ အချိန်ကြာလာတော့ ဘာဖြစ်လို့လဲ ထွက်မေးကြည့်တာ ကိုယ်တောင်ငိုချင်လာတယ်…။ ကလေး ဘဝထဲက ​ရွှေပေါက်ကံထဲက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သေးလေးတစ်ခုမှာ အလုပ်ဝင်လုပ်ခဲ့တာ (၁၀)နှစ်နီးပါးရှိပြီတဲ့ ဆိုင်တွေ ပုံမှန်ရောင်းရချိန်မှာ ညဉ့်နက်တဲ့အထိခိုင်းပြီး မနက်အစောကြီးထရတာမျိုး မငြီးမငြူလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့…။ ထမင်းစားရုံလေး ကျောခင်းတစ်နေရာစာလေးနဲ့သာ ကျေနပ်ခဲ့ရတဲ့…စာမတတ် ပေမတတ် တောက ကလေးတွေကို သက်သက်သာသာဈေးနဲ့ ခိုင်းခဲ့ပြီး… အခုလိုဆိုင်တွေပိတ်ထားရချိန်မှာတော့ တာဝန်မယူနိုင်ဘူးဆိုပြီး ပြောဆိုမောင်းထုတ်ပါတယ်တဲ့ ….လမ်းပေါ်ထွက်လာရပေမယ့် ပိုက်ဆံလည်း တပြားမှမပါ… နေစရာ စားစရာလည်းမရှိ မန်းလေးပြန်ချင်ပါတယ်ဆိုလို့ ကိုသန်းမင်းကြွယ်တို့ ပုလဲ မီးသတ်တွေဆီ အကူအညီတောင်းခဲ့ပေမယ့် …. သူတို့လည်း လူပြည့်နေလို့ တာဝန်မယူနိုင်ပါဆိုလို့ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီလေးငှားပေးပြီး ရွှေပေါက်ကံ Q centre ကို အကူအညီတောင်းဖို့ … Read more
တန်ဆောင်မုန်းလပြည့် ညသည် သူခိုးကြီးည လုံးဝမဟုတ်ပါ…
“သူခိုးကြီးည လုံးဝမဟုတ်ပါ” (တန်ဆောင်မုန်းလပြည့် ညသည် သူခိုးကြီးည လုံးဝမဟုတ်ပါ။) တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ညသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ နေ့ထူးနေ့မြတ်ဖြစ်ပါသည်။ မြတ်စွာဘုရားသည် အဇာတသတ် ရှင်ဘုရင်းအား သာမညဖလ သုတ်တော်ကို ဟောတော်မှု၍ ဘုရင်နှင့်တကွ နောက်ပါပြည်သူ (၁) သိန်းခန့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်တဲ့ ညကြီးပါ။ ဒီလို ကြီးကျယ်ခန်းနားတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာနေ့ကြီးကို မသမာသူများက စုတ်ပျက်အောင် သူခိုးညဆိုပြီး နာမည်တပ်လိုက်တော့ အမှန်တရားက ပျောက်ကွယ်သလို ဖြစ်သွားပါတယ်။ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ည၌ ပစ္စည်းခိုးရခြင်းအကြောင်း ( ကျီးမနိုးပွဲ ) လွန်လေပြီးသော ရှေ့အခါက ယောကျာ်းသားများ ရှင်လိင်ပြန်ကြရာဝယ် ဆေးမှင်ကြောင်ထိုးသည့် ဓလေ့သည် အထင်အရှား ရှိခဲ့၏။ ရှင်ဘုရင်မှ အစချီကာ မင်းညီမင်းသား မှူးမတ်သူကြွယ် ကုန်သည်လယ်လုပ် စသော လူယောကျာ်းတို့သည် ဆေးမှင်ထိုးကြလေသည်။ အခုခေတ်ကဲ့သို့ … Read more
လူပျိုကြီး အပျိုကြီးများ သေဆုံးလျှင် ငှက်ပျောတုံး ထည့်ရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းမှန်…
လူပျိုကြီး အပျိုကြီးသေဆုံးလျှင် ငှက်ပျောတုန်းထည့်ရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းမှန် ငှက်ပျောတုန်းထည့်ခြင်းအဓိပ္ပါယ်… onile ပေါ်မှာ အသက်၈၇ နှစ်အပျိူ ကြီး အခေါင်းထဲငှက်ပျောတုန်းထည့်ခြင်းနဲ့ပက်သက်ပြီး ထည့်ရတဲ့အနှစ်အစစ်ကို ပြောချင်လို့ပါ လူပျိုကြီး အပျိုကြီးသေဆုံးခြင်းနှင့် ငှက်ပျောတုံး မည်သို့ ပတ်သတ်ပါသနည်း ..? အားလုံးလိုလို ပြောဆိုစနောက်နေကြတဲ့ ဟာသစကားလေး တစ်ခွန်းကသေရင် ငှက်ပျောတုံးဖက်နေရမယ် နော် ဆိုတဲ့ ကျီစယ်မှုလေးကြောင့် တစ်ယောက်စ တစ်ရာဆိုသလို တစ်ယောက်က စလို့ သူစ ကိုယ်စနဲ့ လူပျိုကြီး အပျိုကြီးတွေအတွက် ငှက်ပျောတုံးက စ,စရာတစ်ခု ဖြစ်လာ ခဲ့တာထင်ပါတယ် ။ သာမာန်အမြင်အယူအစအနေနဲ့ ငှက်ပျောတုံးကပဲ သေသူအတွက် အဖော်ဖြစ်စေသလိုလို ၊ ဒီဘဝ အိမ်ထောင် မကျပဲသေသွားရလို့နောက်နောင်ဘဝတွေ အတွက်အိမ်ထောင်ကျအောင်ဓာတ်ရိုက် ဓာတ်ဆင်သဘောနဲ့ ယတြာချေတာလိုလို ဒီလိုပဲ ထင်မြင်နေကြတာပါ ။ ဒီကိစ္စနဲ့ … Read more
မိဘတွေ ပေးစားလို့ ယောကျာ်းယူခဲ့ရ တဲ့ အမျိုးသမီး ရဲ့ မင်္ဂလာဦးည အတွေ့ကြုံ
ကျွန်မရဲ့ မင်္ဂလာဦးည ဆိုပေမယ့်လည်း ကျွန်မ မပျော်နိုင်ပါဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့… ကျွန်မ ရဲ့ မင်္ဂလာဦးညဆိုပေမယ့်လည်း ကျွန်မ မပျော်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့က မိဘတွေက အတင်းပေးစားလို့ ယူခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။သူနဲ့ကိုယ်ကလည်းအခုမှ မြင်ဘူး၊ တွေ့ဘူးတာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မ ကြောက်ပြီးတော့ တုန်နေတယ်။ သူက ကုတင်ပေါ် တက်လာတယ်… ပြီးတော့ သူ့ကိုယ်ပေါ် ဝတ်ထားတယ့်အဝတ်အစားတွေချွတ်လိုက်ပါတယ်။ သူက ကျွန်မရဲ့ ပုခုံးလေးကို အသာလာ ကိုင်တာ ကြောင့်ပဲ ကျွန်မရင်ထဲ ကိုရှိန်းဖိန်းပြီး တုန်သွား တာပဲရှင်။ ပြီးတော့ သူက ကျွန်မအနားကိုထပ်ကပ်လာပြီးတော့ကျွန်မကို တိုးတိုးလေးကပ်ပြီး ပြောခဲ့ပါတယ်။ ငါတို့တစ်တွေ.. ညီအစ်မတွေလိုပဲ နေသွားရအောင်ဟယ် တဲ့။ တိန်……ဘဝအမောတွေ ပြေပျောက်နိုင်ကြပါစေနော်။ အခုလိုအချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီး အားလုံးလဲ သာယာပျော်ရွှင်သော နေ့လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ။ … Read more
ဒီလိုအခွအေနမြေိုးမှာ အသားအရကေို Suncream လုံးဝ မလိမျးသငျ့ပါဘူး
ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ အသားအရေကို suncream လုံးဝ မလိမ်းသင့်ပါဘူး နေရောင်ခြည်ဒဏ်ကို ကာကွယ်ဖို့ suncream လိမ်းတာက အသားအရေအတွက် တကယ့်ကို ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ပုံမှန် suncream လိမ်းတဲ့ အသားအရေနဲ့ လုံးဝမလိမ်းတဲ့အသားအရေဟာလည်း သိသိသာသာကို ကွဲထွက်နေတတ်ပါတယ်နော်။ ဒါပေမယ့် suncream က အသားအရေကို ကောင်းမွန်စေတယ်ဆိုပေမယ့် ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာတော့ suncream ကို လုံးဝမလိမ်းသင့်ပါဘူးနော်။ နေရောင်ခံထားတဲ့ အသားအရေ နေရောင်ထိထားတဲ့ အသားအရေ၊ နေရောင်ခံထားတဲ့ အသားအရေမှာ ချက်ချင်း suncream လိမ်းတာမျိုး မလုပ်သင့်ပါဘူးနော်။ ဒါက သင့်ရဲ့ အသားအရေကို ပိုနေလောင်သွားစေတတ်ပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာ အသားအရေရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ နေရောင်ခံထားတဲ့ အသားအရေရဲ့ melanocyte cells တွေကနေ အညိုရောင်တွေကို စတင်ထုတ်လွှတ်ပေးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့ ဒီလိုအချိန်မှာ suncream … Read more
ပတျဝနျးကငျြမှာ အမှတျမထငျတှရှေိ့ရတတျသော အဆောငျကောငျးမြား နှငျ့ ခွင်ျသရေု့ပျထုပါးစပျထဲမှာ မွတျပငျ ပေါကျနတောမြားတှရေ့ငျ အမွနျ နှုတျယူပါ
ခြင်္သေ့ရုပ်ထုပါးစပ်ထဲမှာ မြတ်ပင် ပေါက်နေတာများတွေ့ရင် အမြန် နှုတ်ယူပါ… ရှေးဟောင်း ဘုရားကျောင်းဆောင်တွေနားက ခြင်္သေ့ရုပ်ထုပါးစပ်ထဲမှာ မြတ်ပင် ပေါက်နေတာများတွေ့ရင် အမြန် နှုတ်ယူပါ … အဆောင်ကောင်းဆိုတာ ရှေးဟောင်းဘုရားတွေ ရောက်တဲ့အခါ ဘုရားကျောင်းဆောင်တွေရဲ့ အနားက ခြင်္သေ့ရုပ်ထုတွေကို သေချာကြည့်ကြပါ ပါးစပ်ထဲ မြတ်ပင် ပေါက်နေတာများတွေ့ခဲ့ရင် အမြန် နှုတ်ယူပါ အလွန်ကို အစွမ်းရှိပါတယ်နှုတ်မှာငုံပြီး စကားပြော ပြောသမျှအောင်ပါတယ်… နောက်တစ်ခုက ဘယ်ညောင်ပင်ပဲဖြစ်စေ ညောင်ပင်ကြီးအောက် ညောင်ပင်အငယ်ပေါက်စလေး တွေ့တာနဲ့အချိန် မဆိုင်းပါနဲ့ ချက်ချင်းနှုတ်ယူပါ ဘုရားညောင်ရေအိုးရေနဲ့သွေးပြီး ကြည့်ရင် အမြင်ဓာတ်ရပါတယ်…။ ပေါက်ပင်တစ်ပင်ရဲ့ အရှေ့ဘက်တည့်တည့် ကျီပေါင်းများတွေ့ပါက အမြန် ဖျတ်ယူပါ မိမိမွေးနေ့တိုင်း သွေးသောက်ပါ ပီယ အောင်ပါတယ်…။ အိမ်မြှောင်အမြီး ၂ခွ ပီယ သိဒ္ဓိ အိမ်မြှောင်အမြီး ၂ခွ ရှိသောအိမ်ဟာ … Read more